Isitya soMbane sokusika
Isilungisi soMbane sokumisa
I-Manuwali ye-Bowl Trimmer
2 Koku-1 Khulisa intente
Uphahla Cube Khulisa intente
Khulisa iikhithi zokukhanya
I-Titanium plated scissor
Ngaba ufuna "ukunciphisa" ixesha lakho lokuthena? Ngaba ufuna ukusebenza ngokufanelekileyo egadini kwaye ube nemveliso yomgangatho ophezulu? Nokuba ungumlimi wasekhaya onesityalo nje esinye kwikhabhathi yakho okanye ifama yeehektare ezininzi eneentlobo ngeentlobo, la macebiso kunye namaqhinga aya kuba luncedo.
Eyaziwa ngokuba yi-defoliation, isenzo sokususa amaqabunga kwisityalo esikhulayo sineenzuzo ezininzi. Enye yezi kukuhanjiswa kwamandla, okunokuthi kuthenwe isiqingatha sesithathu esisezantsi ukuya kwisiqingatha sesityalo ukukhuthaza amandla phezulu okanye ukuthena amaqhuqhuva aphezulu ukukhuthaza ukukhula okuthe tye (okubizwa ngokuba phezulu). Ukususa amagqabi aphilayo nako kunceda ukukhanya kungene kwi-canopy. Ukongeza kukukhanya, umoya unokuhamba ngokukhululekileyo ujikeleze isityalo, uqinisekisa ukuba asimi. Ukuba nezixhobo ezifanelekileyo zomsebenzi sesinye sezakhono ezibalaseleyo. Siyathanda ukusebenzisa isikere xa sisusa amagqabi kwi taproot. Ezi zikere ziyakusika nasiphi na isikhondo ozifunela sona.
Xa umsebenzi ufuna ixesha elininzi lezinto eziphathekayo, ixesha yimali, ngoko sinawo amaqhinga okonga ixesha elithile. Enye yezona zinto zibalaseleyo endizifumeneyo kukusebenzisa i-trimmer.
Okokuqala, nqumla iindawo ezithile zesityalo ezithintela ukukhula ngokubanzi. Kungenzeka ukuba amagqabi amakhulu athintela ukukhanya kwezinye izityalo ze-cannabis, zithintele. Susa nawaphi na amagqabi afileyo okanye atyheli, njengoko anokuthi athintele ukukhula kwaye akhuphe imithombo kwizityalo ezisempilweni. Ukuthena kuvumela ukuhamba komoya okuthe gqolo ukuya embindini wesityalo, nto leyo ethintela ukungunda ekukhuleni. Qinisekisa ukuba uqwalasela le miba ilandelayo xa usinwa:
Imozulu iyinxalenye ebalulekileyo phantse kuzo zonke iintlobo zezolimo. Ukukhulisa i-cannabis ngaphandle ekukhanyeni kwendalo kunye neemeko zemozulu inokuba yeyona ndlela ilula, kodwa ihlala ingavelisi isivuno esikhulu se-cannabis. Izityalo zinokulawulwa kwimozulu elawulwayo kwindawo elawulwayo yangaphakathi. Ukutshintsha kwamaqondo obushushu kunye nokufuma ukuqinisekisa okugqibeleleyo, iimeko ezifanelekileyo ziya kuvelisa iziphumo ezikumgangatho ophezulu.
Izityalo ezininzi zidinga ilanga elininzi okanye ukukhanya, kwaye izityalo zidinga malunga neeyure ezili-18 zokukhanya ngosuku ngexesha lokukhula kwemifuno. Ngexesha leentyantyambo, ixesha lokukhanya litshintshile ukuya kwiiyure ezili-12 ngokukhanya kunye neeyure ezili-12 ngaphandle kokukhanya. Ukukhanya kufuneka kusasazwe ngokugqibeleleyo ngokulinganayo kuzo zonke izityalo. Oku kunokufezekiswa ngokukhanya kwe-LED okanye kweCMH, zombini ezinomgangatho obalaseleyo wokukhanya ogcweleyo.
Musa ukukungxamela ukukhula kwezityalo kuba usenokungazifumani iziphumo ozifunayo. Ukuvuna kwangethuba kuthetha ukuba amathupha esityalo akanalo ixesha elaneleyo lokufikelela kumandla awo aphezulu. Ukuba ulinda ixesha elide ukuze uvune izibonelelo, umphumo uya kutshintsha ukusuka kwi-orgasm enamandla ukuya kumava okuphumla. Cinga ngako malunga nesiphumo ofuna ukusifumana.
Uya kubona ukwanda okukhulu kumthamo kunye nomgangatho wesivuno sakho sesityalo.
IPHONE : 0086-752-7211466
I-imeyile : info@virexhydro.com
Idilesi : He Yuzhou's Factory, niutang Area, Opposite Weibao Stone Market, Sha'ao Village Committee, Sandong Town, Huicheng District, Huizhou, Guangdong, China.